आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी NTC ले ल्यायो अहिले सम्मकै सस्तो डाटा अफर ! – Krazy NepaL
May 6, 2021 761
नेपाल टेलिकमले अटम अफरमा सुविधा थप गरेर नयाँ ‘इको भ्वाइस प्लस डाटा कम्बो’ प्याक ल्याएको छ। पहिलाकाे अफर अन्तर्गत प्रतिदिन १ जिबी डाटा प्याक थियो। सो प्याक अन्तर्गत दैनिक १ जिबी डाटा ७ दिनका लागि २५० र २८ दिनका लागि ८५० मा दिइएको प्याकमा भ्वाइस सुविधा थप गरिएको हो।
प्रतिदिन १ जिबी डाटाको हिसाबले जम्मा २८ जिबी डाटा २८ दिनभित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्पनीका अनुसार माथि उल्लेख गरिएका सबै दरहरु कर सहितका हुन्। परिमार्जन गरिएको अफर शुक्रबार राति १२ बजेपछि लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
झण्डै दुइ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि युवतीले के गर्दैछिन ? पत्ता लगाउनुहोस।
Prev१६ बर्षे युबतीहरुले लुगा फुकाल्दै गरेको भिडियो भाइरल, हेर्नुस् भिडियो ।
Nextझण्डै दुइ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि युवतीले के गर्दैछिन ? पत्ता लगाउनुहोस
काेराेना नियन्त्रण गर्न सफल देशमा २०० दिनदेखि सङ्क्रमितको संख्या शून्य
प्रेमीको ८७ वर्षीय बुवा पालेर बसेकी लक्ष्मीको अधुरै भयो विवाह गर्ने सपना, साउदीवाट प्रदीप नआउँदै आफै अस्ताइन्